Otu esi etinye NGINX Ultimate Bad Blocker na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Fraịde, Ọktọba 29, 2021 Monday, May 24, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Nginx Bad Bot Blocker
Otu esi edobe ọrụ Cron maka mmelite akpaaka
Otu esi ahazi Bad Blocker Bot
Mmechi na Comments
Mitchell Krog ike NGINX Ultimate Bad Bot & Referrer Blocker, Onye ọkachamara Linux na-elekwasị anya na nchekwa, ma nye ọrụ ya, ị nwere ike ịgwa ya na ọ bụ otu n'ime ndị ezigbo mmadụ. NGINX Ultimate Bad Bot Blocker bụ, ka ọ dị ugbu a, otu n'ime sọftụwia mepere emepe kachasị mma ị nwere ike ibuga na webụsaịtị gị n'efu yana mmelite na-aga n'ihu nke oge ụfọdụ ugboro abụọ n'ụbọchị. Ọrụ sitere na Mitchell na obodo pụtara ìhè.
NGINX Ultimate Bad Bot & Referrer Blocker juputara na njirimara, gbadaa n'okpuru:
Ihe mgbochi Bots ọjọọ
Ihe mgbochi ndị ọrụ ọjọọ
Ihe mgbochi Spam Referrer
Ihe mgbochi Adware
Ihe mgbochi Ransomware
Ihe mgbochi Clickjacking
Companieslọ ọrụ SEO na BAD IP Blocker
Nginx Rate Limiting Wuru na-emegide DDoS Sistemu
Mgbochi ihe nchọpụta isiokwu WordPress
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi eme wụnye Nginx Bad Bot Blocker na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04 LTS ma ọ bụ karịa.
Iji jiri Nginx Bad Bot Blocker rụọ ọrụ nke ọma mgbe ị wụnyechara, ịkwesịrị ijide n'aka na etinyere curl na sistemụ gị.
Gbaa iwu a ka ịwụnye.
Ọ bụrụ na ejighị n'aka, gbanye iwu ahụ n'agbanyeghị, n'ihi na ọ gaghị emerụ sistemu gị.
Nzọụkwụ mbụ iji wụnye Bad Bot Blocker bụ nbudata script nrụnye aka na Github gọọmentị. Edemede a ga-edozi usoro ahụ na-akpaghị aka, na n'ọtụtụ oge, ntinye aka dị nta ma emesịa achọrọ.
Iji wget iwu, budata ihe ndị a.
Na-esote, gaa na ndekọ ma tọọ edemede nrụnye ka a ga-arụ ya.
Ugbu a lelee ka ijide n'aka na ntọala ikike ahụ gara nke ọma tupu ịmee edemede ahụ.
Ọ bụrụ na emee nke ọma, ị ga-enwe x na njedebe nke ikike gị, yana install-ngxblocker ịbụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ugbu a, jiri iwu a mebie edemede a:
Ebudatala faịlụ achọrọ na akwụkwọ ndekọ aha achọrọ na nwụnye NGINX gị site na ebe nchekwa.
Na-esote, tọọ NGINX Bad Bot Blocker & Referrer melite ma melite scripts ma rụọ ya site na iwu ndị a:
Lelee ikike chmod, hụ na ọ bụ eziokwu.
Wụnye Nginx Bad Bot Blocker ugbu a na-eme ihe ederede ntọala.
Nsonaazụ na-egosi na agbakwunyere edemede ahụ na faịlụ nhazi vhost NGINX (ihe nkesa ihe nkesa). Ọzọkwa, akụkụ ọzọ dị ịrịba ama nke ntinye edemede a ga-edepụta adreesị IP gị ozugbo na faịlụ whitelist-ips.conf.
Enwere ike ịgbakwunye adreesị IP ọ bụla achọrọ nke chọrọ ndenye ọcha ma emechaa. Ọmụmaatụ ihe ọ nwere ike ịdị ka n'okpuru:
Na-esote, gosi na esonyela na ihe mgbochi bot ọjọọ ahụ nginx.conf faịlụ nhazi site na iji editọ ederede ọ bụla.
Na faịlụ nhazi, a ga-agbakwunye ihe ndị a.
Rịba ama, nke a nwere ike ịpụta n'ebe ọ bụla na faịlụ nhazi, ntinye akpaka na nhazi edemede na-eme ike ha niile iji tinye ihe achọrọ gụnyere na ebe kacha mma. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ike ịhazi ya mgbe ụfọdụ, mana ị nwere ike iji aka dozie ya na nginx.conf faịlụ.
Iji mechaa akụkụ nrụnye, anyị ga-eme iwu ndị a iji nwalee wee malitegharịa ihe nkesa NGINX:
Gaa n'ihu ka ịmalitegharịa ihe nkesa NGINX:
Ekele, ị tinyela Nginx Bad Bot Blocker nke ọma na Ubuntu 20.04.
A na-emelitekarị isi mmalite nke ndị ọrụ-adịghị mma, adreesị IP, ngalaba na ndị ọzọ ugboro abụọ kwa ụbọchị. N'ihi ya, ọ dị oké mkpa ịtọọ ọrụ akpaaka ka ị na-enyocha na imelite iji chebe megide ihe iyi egwu kachasị ọhụrụ. Ụzọ kachasị mma isi mee nke a bụ iji ọrụ cron.
Nke mbụ, mepee crontab na ọdụ gị:
Tinye ihe ndị a, nke atọrọ ka ọ bụrụ oge awa 8 nke akwadoro nke ukwuu nyere edemede mmelite. Ọ dị fechaa nke ukwuu.
Mara, ọ bụrụ na ịmaghị maka ntọala oge cron, gaa CronTab.Guru bụ ezigbo mgbako/nnwale nke ị nwere ike idetuo/mado.
Nginx Bad Bot Blocker na-enye gị ike ịhazi onwe ya nke ọma n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, dị ka ịgbakwunye blacklists, whitelists, ndị ọrụ-ọrụ, na ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, gbanwee faịlụ na-esote /etc/nginx/bots.d/blacklist-ips.conf na ịgbakwunye ndetu ojii emere nke ọma.
Uru ọzọ dị ukwuu na-eme ka ndị na-acha ọcha na-eme onwe gị na ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka 100% jide n'aka na egbochighị ha. Ị nwere ike ime nke a site na ịgbakwunye otu adreesị IP ma ọ bụ subnets.
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nhọrọ na ụzọ ha ị nwere ike hazie site na ịgbakwunye data agbakwunyere. Ihe kachasị mkpa bụ na mmelite anaghị emetụta faịlụ nhazi ndị a, yabụ ị gaghị efunahụ data ị gbakwunyere mgbe Nginx Bad Bot Blocker na-emelite onwe ya.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Nginx Bad Bot Blocker na sava Ubuntu 20.04 LTS. N'ozuzu, nke a dị mma maka sava nwere ohere azụ azụ raara onwe ya nye ma dị oke ọkụ ma nwee ike ịhazi ya, ma ọ bụrụ na saịtị gị nwere nsogbu ọrịa bot, nke a ga-enyere aka kpochapụ ya.
Categories Ubuntu Tags NGINX, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Fraịde, Ọktoba 15, 2021 1:01 nke abalị
wget https://raw.githubusercontent.com/mitchellkrogza/nginx-ultimate-bad-bot-blocker/master/install-ngxblocker -O / usr / local / sbin / install-ngxblocker……….. na-abịa na ikike agọnahụ oge ọ bụla ???
user@fxr-i-7:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] paswọọdụ maka onye ọrụ:
Kụrụ: 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu gbadoro-nche InRelease
Kụrụ: 2 http://apt.connectify.me mee ka Mwepụta ngwa ngwa
Kụrụ: 3 http://ppa.launchpad.net/flatpak/stable/ubuntu Baịbụl hiwere isi n'ebe
Kụrụ: 4 http://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu Baịbụl hiwere isi n'ebe
Kụrụ: 5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu Baịbụl hiwere isi n'ebe
Kụrụ: 6 http://archive.canonical.com/ubuntu Baịbụl hiwere isi n'ebe
Kụrụ: 7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu gbadoro anya-mmelite InRelease
Kụrụ: 8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu itinye uche-backports InRelease
Nchịkọta niile dị ugbu a.
Na-agbakọ nkwalite… Emela
Awụnyere ngwungwu ndị a na-akpaghị aka ma ọ chọghịzi:
gconf-ọrụ gconf-ọrụ-azụ gconf2-nkịtị libappindicator1 libc++1
Jiri 'sudo apt autoremove' wepụ ha.
0 kwalitere, 0 ọhụrụ arụnyere, 0 wepu na 0 adịghị ebuli.
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/mitchellkrogza/nginx-ultimate-bad-bot-blocker/master/install-ngxblocker -O /usr/local/sbin/install-ngxblocker
/usr/local/sbin/install-ngxblocker: Ajụrụ ikike
Fraịde, Ọktoba 15, 2021 2:45 nke abalị
Gbalịa iji sudo wget https://raw.githubusercontent.com/mitchellkrogza/nginx-ultimate-bad-bot-blocker/master/install-ngxblocker
M ga-ehichapụ nkuzi ahụ ntakịrị ka nke a pụta ìhè, mana nke a kwesịrị ime ka ị gaa ugbu a.
Fraịde, Ọktoba 29, 2021 4:08 nke ụtụtụ
agaghị wụnye na-ekwu mkpa "curl"
Fraịde, Ọktoba 29, 2021 4:13 nke ụtụtụ
mgbe ị na-agbalị igbu , ọ na-ekwu mkpa curl
Fraịde, Ọktoba 29, 2021 4:27 nke ụtụtụ
sudo: ./wget: iwu ahụghị
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ sudo ./wget curl
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ local x=based_list=”wget curl”
bash: local: enwere ike iji naanị n'ọrụ
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ x= depend_list=”wget curl”
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ -z $(find_binary $x)
find_binary: iwu ahụghị
-z: iwu ahụghị
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ wget curl
Na-edozi curl (curl)… dara: Amaghị aha ma ọ bụ ọrụ.
wget: enweghị ike idozi adreesị onye ọbịa 'curl'
onye ọrụ @fxr-i-7:~$
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ local x = depend_list = "wget ​​curl" bash: local: enwere ike iji naanị na ọrụ
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ x = dabere_list = "wget ​​curl"
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ -z $(find_binary $x) find_binary: iwu ahụghị -z: iwu ahụghị
onye ọrụ @fxr-i-7:~$ wget curl --2021-10-28 13:24:32-- http://curl/ Resolving curl (curl)... dara: Amaghị aha ma ọ bụ ọrụ. wget: enweghị ike idozi adreesị onye ọbịa 'curl'
Fraịde, Ọktoba 29, 2021 7:08 nke ụtụtụ
Emelitela m nkuzi ka m gosipụta itinye ngwungwu curl. Biko mee iwu a.
sudo dabara wụnye curl -y
Nke a kwesịrị idozi njehie ị na-enwe. Mee ka m mara ma ọ bụghị.
Daalụ maka ịbịarute.